Dib loo soo celiyey
"Iyagu waa sida geed oo kale oo lagu beeray durdurrada biyaha, kaasoo midhihiisa dhala xilligiisa, Oo laamahoodu ma engejiso" (Sabuurradii 1: 3),
Bannaanka u mararka qaarkood dhigaan warshad meel fiican. Markii weel lagu rito, waxaa si fudud loogu dhaqaaqi karaa si loo helo iftiinka qorraxda ama hooska badan, wax alla wixii warshadda u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa in warshadda lagu qodmi ​​doono gebi ahaanba xididdada loona wareejiyo halka ay si wanaagsan ugu kori karto.
Inta badan tarjumaadaha Sabuurrada 1: 3 ayaa isticmaala erayga "la beeray". Si kastaba ha noqotee, ereyga "dhowaan la beeray" waxaa loo isticmaalaa Kitaabka Quduuska ah ee Wadajirka ah. Fikradda ayaa ah in kuwa ku raaxaysta tilmaamaha Ilaah u dhaqmaan sidii koox ama shaqsi ahaanba sidii geed oo dib loo aasaasay. Tarjumaadda Ingiriisiga "Fariinta" waxay u sharaxeysaa sidan: "Waa geed cusub oo lagu dhex beeray Ceeden, kaas oo bil kasta keena miro cusub, caleemaha weligood ma engegaan oo had iyo jeer ubaxu".
Qoraalka asalka ah ee Cibraaniga waxaa ku jira falka "schatal", oo macnaheedu yahay "geli", "transplanted". Si kale haddii loo dhigo, geedka waxaa loo raraa meeshii uu markii hore ku jiray oo wuxuu u dhaqaaqay goob cusub si uu ubaxyo cusub ubaxyo u yeesho oo uu miro badan u keeno. Waxay maskaxda ku haysaa wuxuu Masiixu ku yidhi Yooxanaa 15:16: "Adigu ima dooran, laakiin waan ku doortay oo waxaan go'aansaday inaad tagto oo midho yeesho oo aad midhahaaga sii haysatid."
Isbarbar dhig waa cajiib. Ciise wuxuu noo doortay bacrin. Laakiin si aynnu u korayno, waxay ahayd in naloogu dhaqaaqo xagga ruuxa. Bawlos wuxuu qaatay fikradan isagoo ku dhawaaqaya in rumaystayaashu midho dhalaan maxaa yeelay waxay ku nool yihiin kuna dhex socdaan ruuxa ay ku aasaaseen. "Sidii aad u aqbasheen Rabbi Ciise Masiix, ku dhex socda, aasaaska oo aad dhisi doontaan isaga oo isku sii adkaysta rumaysadka sida laydin baray inaad barako ku mahadisaan" (Kolosay 2: 7).
Waad ku mahadsantahay, Aabe, sababta aad nooga dhaqaaqday meeshii hore ee noloshii hore, oo si adag ugu dhisneyd Ciise oo aan ku aaminnay magaciisa. Aamiin.